Umbuzo: Ingabe Ukugijima Kuzosiza Ukuhamba Ngebhayisikili Lami - BikeHike
Ingabe ukugijima kulimaza ukusebenza kwebhayisikili?
Ingabe abagibeli bamabhayisikili badinga ukugijima?
Umgibeli webhayisikili kufanele agijime kangakanani?
Ingabe kufanele ngigijime ngaphambi noma ngemva kokuhamba ngebhayisikili?
Ngingakwazi ukugijima futhi ngijikeleze ngosuku olufanayo?
Kungani abagibeli bamabhayisikili bengakwazi ukugijima?
Kungani kunzima kangaka ukugijima ngemva kokuhamba ngebhayisikili?
Ingabe kubi ukugijima ngemva kokuhamba ngebhayisikili?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili noma ukugijima kungcono ukuze uthole amandla?
Ukuhamba ngebhayisikili kuzowushintsha kanjani umzimba wami?
Ingabe kuhle ukujikeleza ngemva kokujima?
Kufanele ngihambe ngebhayisikili isikhathi esingakanani ukuze ngizivocavoce kahle?
Ingabe abagibeli bamabhayisikili baqinile kunabagijimi?
Ungakwazi yini ukulahlekelwa amafutha esiswini ngebhayisikili?
Ingabe ukugijima kakhulu kunokuhamba ngebhayisikili?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili noma ukugijima kungcono nge-VO2 max?
Ingabe imayela elingu-5 lilungile ngebhayisikili?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukwenza umgijimi onensayo?
Ingabe ukugijima nokuhamba ngebhayisikili kusebenzisa imisipha efanayo?
Kungani ukugibela ibhayisikili kuzwakala kulula kunokugijima?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kwenza isinqe sakho sibe sikhulu?
Ngabe ukuhamba ngebhayisikili kuyayikhulisa imilenze yakho?
Ingabe kuhle ukuhlanganisa ukugijima nokuhamba ngebhayisikili?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kungakunikeza i-abs?
Ingabe kungcono ukuhamba ngebhayisikili noma ukugijima kuqala?
Mangakhi amamayela okugibela ibhayisikili alingana nokugijima?
Kufanele ngiziqeqeshele kanjani ukuhamba ngebhayisikili nokugijima?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kunzima kunokugijima?
Ukwenyuka Kwenhliziyo Yemithambo, Amandla Emisipha kanye Nokubekezelelana Kokuzivocavoca. Ngaphezu kokuqina kwamathambo okukhulu, ukugijima njengokuzivocavoca umzimba kunganikeza ulwazi oluhluke ngokuphelele lwe-aerobic kumgibeli webhayisikili, okuholela ekwandiseni amandla nokukhuthazela kwemisipha.
Uma ugijima, umonakalo we-muscle fiber okwenzekayo mkhulu kakhulu kunomonakalo owenzeka lapho ugibele ibhayisikili. Ngakho, iseshini yokugijima ye-aerobic yamahora amabili izoba ingcindezi enkulu kakhulu emzimbeni wakho kuneseshini yokuqeqeshwa kwe-aerobic yamahora amabili ngebhayisikili.
Ngemuva kwekhefu elifushane lokuphela kwesizini, faka phakathi ukugijima ohlelweni lwakho lokufaneleka lwasebusika. Phakathi nesigaba 'sesimo esijwayelekile' sokuqeqeshwa akunandaba ukuthi uhlala kanjani ufanelekile isikhathi eside njengoba usenza, futhi ngale ndlela ukugijima kungase kusize ukuhamba kwakho ngebhayisikili.
Kufanele usebenze uze ukwazi ukugijima imizuzu engu-30 ngokunethezeka, ngaphandle kokuzwa ubuhlungu obukhulu ngosuku olulandelayo. Ezinye izici ezithinta ukubekezelelana komzimba ekugijimeni zihlanganisa: Isikhathi (Isikhathi esiphelele sokuqeqeshwa) Indlela (Izinhlobo zokuqeqesha ezisetshenzisiwe).
Impendulo emfushane wonke umuntu ayifunayo ingafinyezwa. Uma ufuna ukwakha imisipha, gijima kuqala. Uma ufuna ukwakha amandla akho okubekezela namandla e-aerobic, gijima ekugcineni. Empeleni, ukusabela komzimba wakho okuguquguqukayo kukhulu ohlotsheni lokuzivocavoca oqeda ukujima kwakho ukuwenza.
Qaphela ukuthi kuzoba inzuzo enkulu ye-cardio kune-muscular. Ukwenza kokubili ngosuku olulodwa kufanele kube kuhle inqobo nje uma uzinikeza ukululama okwanele.
Ukuhamba ngebhayisikili kwakha imisipha ongayisebenzisi kakhulu ekugijimeni, ngaleyo ndlela kuvimbele amajaqamba nokulimala, futhi ukugijima kwakha imisipha engavamile ukusetshenziswa ekugibeleni ibhayisikili, okuyimisipha. Kokubili kunomthelela ku-cardio yakho, kodwa ngicabanga ukuthi ukugijima ungakwazi ukuphunyula ngokujima okufushane kakhulu (okuhlakaniphe kakhulu kwe-cardio) kunalokho ongakwenza ngebhayisikili.
Iphuzu liwukuthi njengoba usuka ekugibeleni ibhayisikili uye ekugijimeni imisipha engena ukuzodlala idinga isikhathi sokujwayela ukunyakaza okusha nokucindezeleka okubekwe phezu kwayo. Yingakho uvame ukuba buhlungu emasontweni amabili okuqala okusebenza, futhi ifomu lakho lokugijima/lokugijima lizwakala lingasebenzi kahle.
Ekuqeqesheni, unokukhetha. Wonke umuntu uyavuma ukuthi abadlali abathathu badinga ukugijima ngemva kokugibela ibhayisikili ngendlela yokulungiselela ukwenza okufanayo emijahweni, kodwa futhi kukhona ukuvumelana ukuthi akudingekile ukugijima ngemva kwayo yonke into.
Ukuhamba ngebhayisikili kuwumdlalo onomthelela omncane osiza ukwakha ukubekezela nesibindi. Uma kuqhathaniswa nokugijima, kulula ukwakha nokugcina amandla ngenkathi uhamba ngebhayisikili ngoba ubuhlungu bemisipha kanye nokulimala kuyabambezeleka ngenxa yomthelela ophansi.
Ukulawula isisindo Ukuhamba ngebhayisikili imvamisa, ikakhulukazi uma unamandla amakhulu, kusiza ukwehlisa amazinga amafutha omzimba, okukhuthaza ukuphathwa kwesisindo okunempilo. Futhi, uzokhuphula i-metabolism yakho futhi wakhe imisipha, okukuvumela ukuthi ushise ama-calories engeziwe, noma uphumule.
Gibela kuqala uma unomjaho ozayo. “Lapho ukujima kwamabhayisikili kuyinto eza kuqala kuwe, okunye ukuzivocavoca kwakho kudinga ukusekela izinzuzo zakho zokuhamba ngebhayisikili,” kusho uHammond. Lokho kusho ukuthi—uqagele—kufanele ugibele kuqala uma udinga ukwenza izikhathi zakho ze-cardio namandla ngosuku olufanayo.
Hlela ukugibela ibhayisikili lakho bese ugibela imizuzu engu-30-60, izinsuku ezingu-3-5 ngesonto. Qala konke ukugibela ngokuzifudumeza. Pedal ngesivinini esincane, esilula imizuzu emi-5-10. Bese ukhulisa isivinini sakho ukuze uqale ukujuluka.
Uma ugijimile futhi ugibele ibhayisikili isikhathi esifanayo, ukugijima kuzoba isishisi esikhulu sekhalori. Uhlezi phansi ngenkathi uhamba ngebhayisikili, phela. Umgibeli webhayisikili ushisa cishe ama-calories angu-3,500-4,500 esigabeni ngasinye sohambo (imvamisa cishe amahora amahlanu noma ayisithupha), kuyilapho umgijimi webanga elide ezoshisa cishe angu-3,000 emjahweni owodwa.
Ukuzivocavoca ngebhayisikili okungenani imizuzu engu-30 ngosuku kuzokwakha ukukhuthazela kwakho kwenhliziyo nemisipha. Ungase futhi uzwe amazinga aphezulu wamandla usuku lonke, ngoba ukuvivinya umzimba kusiza ukukhulisa ukuqina kwakho kukonke.
Yebo, ukuhamba ngebhayisikili kungasiza ekulahlekelweni amafutha esiswini, kodwa kuzothatha isikhathi. Ucwaningo lwakamuva lubonise ukuhamba ngebhayisikili okuvamile kungase kuthuthukise ukulahlekelwa kwamafutha okuphelele futhi kukhuthaze isisindo esinempilo. Ukunciphisa ukujula kwesisu kukonke, ukuzivocavoca kwe-aerobic okunamandla okumaphakathi, njengokuhamba ngebhayisikili (ngaphakathi noma ngaphandle), kuyaphumelela ekwehliseni amafutha esiswini.
Ukugijima nokuhamba ngebhayisikili yizinto zokuzilibazisa zakudala nokuzivocavoca abantu abakuthokozelayo emhlabeni jikelele. Ngokuvamile, ukugijima kushisa amakholori amaningi kunokugibela ibhayisikili. Kodwa futhi kunomthelela ophezulu futhi kunzima emisipha namalunga.
Njengoba ukuqina kwakho kwe-cardiorespiratory (VO2 max) kuba ngcono, amaphesenti aphansi omthamo wakho womsebenzi wangaphakathi ayadingeka ukuze kukhiqizwe inani elifanayo lama-watts. Uma ungumgibeli webhayisikili nomgijimi osebenzayo, uzoqaphela ukuthi une-VO2 max eyodwa yokugibela ibhayisikili kanye nenani elikhulu elifanayo kodwa elihluke kancane le-VO2 lokugijima.
Isikhathi esijwayelekile sokuhamba ngebhayisikili imayela imizuzu emithathu kuya kwemine. I-17 kuye ku-18mph isivinini esimaphakathi sokuhamba ngebhayisikili somuntu ophile kahle ohamba ngebhayisikili elinekhwalithi ehloniphekile endaweni eyisicaba ngisho nendawo.
Ukugibela ibhayisikili akusizi ukuthi ugijime ngokushesha. Ukuze ube umgijimi osheshayo, kufanele uziqeqeshe ngokugijima. Ukwengeza ukuhamba ngebhayisikili ohlelweni lwakho lokuqeqeshwa ngeke kukusize ufinyelele izikhathi zokugijima ngokushesha, nakuba kungasetshenziswa njengethuluzi lokuqeqesha eliphumelelayo uma lisetshenziswe kahle.
Kokubili ukugijima nokuhamba ngebhayisikili kusebenzisa ama-quadriceps nama-hamstrings, imisipha yethanga yangaphezulu neyangemuva esebenzisanayo. Ama-quad akho aphakamisa umlenze ukuze athole igxathu eliqinile lapho ugijima noma uzungeza i-pedal lapho uhamba ngebhayisikili, kuyilapho ama-hamstrings akho edonsa umlenze emuva phansi. Lapho ugijima, imisipha yakho yethanga yimisipha eyinhloko.
Empeleni, ngenkathi imilenze yakho inamandla kakhulu kunalokho okudingeka ibe yikho ukuze uhambe noma ugijime, isasebenzisa imisipha eminingi kunokugibela ibhayisikili. Amabhayisikili 'angakwazi,' 'ugu' (okungukuthi lapho ugibela wehle umqansi), okuzokwenza ukwazi ukuhamba ngesivinini esingaguquki ngaphandle kokudinga ukugcina izinga eliphezulu lokuzikhandla ngokomzimba.
Ukuhamba ngebhayisikili ngeke kukunikeze i-butt enkulu, kodwa kungase kukunikeze ukuhleleka okwengeziwe ngenxa yezinzuzo zakho ze-cardio ne-muscle-building. Kodwa-ke, uma ugibela njalo ngesivinini esiyinselele nokumelana, cishe uzobona i-tush enamandla kakhulu - kanye nezinzuzo zezempilo ezihambisana nakho, okuhlanganisa ubuhlungu obuncane be-hip, idolo neqakala.
Impendulo emfushane yokuthi ukuhamba ngebhayisikili kuzokwenza imilenze yakho ibe mikhulu noma cha - cha. Yiqiniso, ukuhamba ngebhayisikili kuthuthukisa imisipha yakho yomlenze, kodwa njengokuzivocavoca kwe-aerobic, kusebenza imicu yakho yemisipha yokukhuthazela, ibenze imelane kakhulu nokukhathala ngenkathi uqeqesha, kodwa ingabangeli ukuba ibe yinqwaba.
Ukuthuthukisa ukusebenza Ukuhamba ngebhayisikili kusiza ukuthuthukisa ukusebenza ngokugijima ngokuthuthukisa ukuqina, ukuqina nokuqina ngaphandle kokulimaza imisipha yemilenze yakho. Kungumphumela omuhle kakhulu wokujima kwenhliziyo nemithambo yegazi futhi ngokukwengeza ohlelweni lwakho lokuqeqeshwa lwamasonto onke kuzokusiza ukuthi wenze okwengeziwe ngokucindezeleka okuncane emzimbeni wakho.
Ukuhamba ngebhayisikili akwakhi i-abs yakho ngokuqondile, kodwa kungasiza ukuveza i-abs yakho uma ihambisana nokudla okufanele kanye nokuzivocavoca okwengeziwe. Ukugibela ibhayisikili kusiza ukuhlikihla amafutha amboze i-abs yakho.
Ukugijima kushisa amakhalori amaningi kunokugibela ibhayisikili futhi kuthembekile futhi kumisipha ye-toning, ngakho-ke, ngokombono, kungase kuthuthukise ukufaneleka kwakho ngokwengeziwe. Ukuze uthole okuningi kuyo yomibili le misebenzi, thatha uhambo lwebhayisikili kuqala bese ugijima, uzikhawulele kumaphesenti angeqile ku-10 wemayela owalihamba ngebhayisikili njengoba uqala.
Umthetho ojwayelekile wesithupha yi-1:3 noma 1:2 run to bike ratio ngamamayela. Ngamanye amazwi, imayela elingu-1 lokugijima ezingeni elimaphakathi lilingana nokuhamba ngebhayisikili amamayela angu-2-3 kuleveli yomzamo efanayo. Ukugijima kuwumsebenzi onomthelela omkhulu futhi kudinga wonke umzimba ukuthi unyakaze.
Nazi izindlela ezintathu zokuhlanganisa ukuhamba ngebhayisikili nokugijima ohlelweni lokuqeqesha lwasehlobo olujabulisayo: Ziqeqeshe kanzima lapho ugijima futhi ululame ngebhayisikili. Uma ungumgijimi oziqeqesha ngokusebenza kanzima okuhlanganisa ukugijima okude, i-speedwork, i-tempo run, nokusebenza kwamagquma, ungakwazi ukuhlanganisa imisebenzi emibili elula yokugijima ngebhayisikili masonto onke.
Kuqine kakhulu—amalunga akho nemisipha kufanele kusebenze kanzima kakhulu ngesikhathi sokugijima. Ebhayisikilini, isisindo somzimba wakho sisekelwa isihlalo futhi ibhayisikili lakho likusiza ukukuqhubekisela phambili. Kimina, kuzwakala sengathi ukugijima kwehora elilodwa kulingana okungenani namahora amabili ebhayisikilini.
Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kuyasiza Ukugijima
Umbuzo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kuyasiza Ekuqedeni Ukugijima
Ingabe Ukugijima Kuyasiza Ukukhuthazela Kwebhayisikili
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kuyasiza Ukugijima I-Reddit
Ingabe Ukugijima Kuyakusiza Ukuhamba Ngebhayisikili
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kuyasiza Ukugijima Ukukhuthazela
Ingabe Ukugijima Kuyasiza Ukuhamba Ngebhayisikili Emgwaqweni
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kuyasiza Ngokugijima Ukujima
Ingabe I-Indoor Cycling Iyasiza Ngokugijima
Ukuhamba Ngebhayisikili Kungakusiza Ukugijima Ngokushesha
Umbuzo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kukusiza Ukugijima Kangcono
Impendulo Esheshayo: Ingabe Ukuhamba Ngebhayisikili Kukusiza Ukugijima Ngokushesha